Shabelle Media Network – Amnesty International oo ka digtay qatar ka dhalata Haddii Xayiraadda Hubka Laga qaado Soomaaliya HOME
Amnesty International oo ka digtay qatar ka dhalata Haddii Xayiraadda Hubka Laga qaado Soomaaliya
Nairobi (Sh.M.Network)— Hey’adda u Dooda Xuquuqul Insaanka ee lagu Magacaabo Amnesty International ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uga digtay in xayiraadda dhinaca hubka ah lag qaado Soomaaliya.
15-ka dal ee golaha ammaanka u qaabilsan xayiraada dhinaca hubka ah ee la filayo in dowladda Soomaaliya laga qaado ayaa sheegay in ay ka barandagayaan ku dhawaad mudo sanad ah in Soomaaliya laga qaado Xayiraadda Hubka ee saran ,iyagoo sheegay in ay fasixi doonaan hubka Dowladda Somaaliya inta laga dhisayo Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Gemma Davies oo ah madaxa Hay’ada Amnesty International ayaa xayiraadda dhinaca hubka ka saaran soomaaliya ku sababeeyay suurtagalnimad Qatar ama dhibaatooyin bini’aadanimo oo ka dhalan karto Hubkaasi.
Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa cunaqataeen dhinaca hubka ah Soomaaliya ku soo rogay 1992-dii kadib markii Xukuumada dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday. 1991-dii.
Dowladda Soomaaliya ayaa golaha amaanka ka dalbaday in Xayiraadda Dhinaca hubka ah Laga Qaado Soomaaliya,si dowladda ay u hesho hub iyo Agab Militari oo ku Filan Dowladda